Ukuba sithetha ngokuphila ngendlela yokuhlala, abantu baseofisi bayasebenza kakhulu ekuseni kunabendlukazi. Ibhinqa lijikeleza le ndlu, liqokelela umyeni wayo nomntwana, ihlamba, iipende, igqoke, ilungiselela kwasekuseni. Umfazi wendlu uyalahlwa yile mihlali yokunyakaza. Ngokuqinisekileyo, uhlamba, ngoko ubeka iingubo zakhe zasekhaya ngokuthula. Akudingeki ukuba agijime malunga neendlu, enze iinwele zakhe, okanye upende - akayidingi. Zonke izinto zokuhamba zizolile, kwaye intombi yeofisi iyatshisa iikhalori ezininzi ekuseni. Indlela yokuphila yokuhlala ngokwexesha elidlulileyo - usongelo kwimpilo
Emva koko igosa le-ofisi likhawuleza kwindawo yokupaka okanye imise. Ukuba ufuna ukuyeka, ukuza kufinyelela kuyo, utshisa iikhalori ezingaphezulu. Ukupaka, ukuba kungekho egcekeni, kuyafaneleka, ngoko kufuneka ufike eofisi. Umama wendlu unayo iofisi yakhe yasekhaya xa edibanisa izibhambathiso ukuze alayishe okanye asebenze njenge-freelancer, elineemitha ezimbini. Ngenxa yoko isigqibo - indlela eya kulo msebenzi ayitshisi iikhalori ezivela kumama wendlu.
Ukususela ekuseni e-ofisi kukho ukunyakaza. Ukuba awuyi kuthatha ingxubusho ekulawuleni kusasa kuyo nayiphi na intlangano-into yokufunda, ukufumanisa, ukuthatha idatha, ukujonga kwisebe le-accounting kunye negumbi lokulinda, kwiiofisi, amasebe, ukuhamba kunye ne-kettle kunye ne-mugs, njalo njalo. Kwaye ngeli xesha umfazi wendlu, esebenzisa indlu yakhe emsebenzini kunye nesikolo, uhlala etafileni lokutya kwaye unokuthula ngokutya kwakhe kwasekuseni. Akayidingi idatha, nguye umphathi wakhe, kwaye unokuqokelela kuphela ikati okanye inja yakhe kwintlanganiso.
Ngethuba leentsuku zonke zokusebenza, abesifazana kunye nabesifazane bamaofisi banokuthiwa balingana. Abafazi be-Ofisi bahlelwe kwiihlalo zabo kwaye baxubene kwihlabathi lamanani, iileta kunye nezinye iimpawu. Abafazi bezindlu baya ekhitshini, apho ongeke uchithe iikhalori ezininzi, kuba yonke into iyafumaneka. Kwaye itafile kunye neqrijini zikhona. Kwaye ukuba uhlala phantsi etafileni xa ucola imifuno nenyama, awuyi kuva uluhlu. Kuya kubakho ubomi obufanayo bokuphila.
Yiba nomfazi ohlambulukileyo. Le nto ingaxilongo phambi kwe-lady lady. Ngokuchasene nemvelaphi yeminye imisebenzi yasekhaya yokucoca iyanceda ukutshisa ezininzi iikhalori. Konke kuxhomekeke kwindlela uhlambulula ngayo. Ukuba umncedisi wakho ngumcocisi omkhulu, ke akufanele ugobe. Kanye emva kweenyanga ezimbini kufuneka ufike kwi-stool, ukuze usule izibuko kwicandelo. Icandelo elisebenzayo ekuhlambuleni liya kuxhoma iimpahla. Kodwa ukuba kukho ii-perches ezikhululekile kwindawo yokuhlambela, akudingeki uphakamise izandla zakho.
Kwaye ngeli xesha eofisini kukho ukuphulwa kwezobuchwepheshe, xa ufuna ukushiya ikhompyutha yakho kwimpilo yakho kunye neofisi ye-gymnastics. Ungakwazi ukhethe ngokulula isethi yokuzivocavoca kwiofisi.
Ukuba unqwenela, umama wendlu unokunciphisa ukucoca kwaye "umhla wokusebenza" uya kunikezelwa kwinqumlo kwiqhekeza okanye umcuphi wakho oyithandayo - uphinde uphile ngendlela yokuphila. Umfazi osebenzayo ongalibali ukuvuka ngamanye amaxesha esihlalweni kunye nokufudumala kuphela.
Abafazi beeofisi kwikhefu banganikwa isundu somqhubhiso. Ukuze badle isidlo sakusihlwa, badinga ukubeka ijeyethi okanye imvula ye-raincoat baze baye kwigumbi lokudlela okanye i-cafe. Kufuneka ufike kuyo, buyela eofisini, nantsi uhambo lokuhamba emoyeni omtsha. Ukuba unako ukutya ngokukhawuleza, emva kwemizuzu engama-30 uze uhambe.
Kwaye ngelo xesha umfazi wendlu wayibeka isidlo esiphekiweyo kwisitya sakhe waza wahlala phantsi ukuze adle. Umzimba wakhe ufumana iikhalori, ngelixa ungachithi nantoni na. Ikhefu iya kuba yicoca, kodwa njengoko ivela, ayinabo bonke abafazi, kwaye akusiyo yonke imihla.
Kwimeko yokuthenga, abafazi bezindlu nabafazi beeofisi balingana. Baphinde baye kumasebe esitolo kwaye baqoke amabhokisi, amaphakheji, amathanga kwiinqwelo, kodwa bakwenza ngamaxesha ahlukeneyo.
Ukuza emsebenzini, iofisi i-madam iqala ukuhlamba, ihlambuluke, ipheke isidlo, umama wendlu ulungele, ngoko ngokuhlwa, ukunyakaza kwakhe kungaphantsi kwowesifazane osebenzayo.
Ngoku siyabona ukuba abafazi abangabasebenzi nabasebenzi beeofisi baqhuba indlela yokuphila. Ngoko ke, kukho izinto ezifanayo zokusongela impilo. Uthini umahluko phakathi kokuhamba kunye nendlela yabo yobomi? Ukuba ibhinqa lifumana ithuba lokuya echibini, ukugijima, ukuya kwindawo yokuzivocavoca, ngokokuphila kwindlela yokuphila.
Bafazi abathandekayo, apho usebenza khona - eofisini okanye ekhaya, khumbula ukuba isimboli, itoni kunye nempilo yomqolo wakho kuxhomekeke kuwe. Ukusebenza e-ofisi akusizathu sokubangela, kwaye akusikho isohlwayo. Ukuxhamla kunezizathu eziliwaka zokungafuni ukwenza nantoni na, kwaye umnqweno unezinketho eziliwaka ngexesha elifanayo.
Uncedo lokuqala lokutshatyalaliswa kweshushu
Ukwelashwa okulula nokusebenzayo komqala
Yiyiphi ikhowudi yokunyamezela kunye nomgaqo wezenzo zayo
Iinqununu zobuhle besifazana
I-currant emnyama, izakhiwo eziwusizo
Ukugcinwa kwee-Urinary, ukungabikho kokuvuthwa
Ukuphulukisa iipropati ze-blackberry
I-coast yengulube nama-mushroom
IHoroscope yeNtombikazi ngoNovemba 2016
Inkcazo yomxholo wendawo yolwazi lomntu
Njengo-actress uLily Collins wakwazi ukunqoba i-anorexia kwaye wagcina isalathisi esincinci
Indlela yokupompa izihlunu zezandla
Indlela yokuphumla nokuphumla
I-horoscope efanelekileyo yeveki kaJanuwari 8-14, 2018
Luhlobo luni lwenja ehlakaniphile
Ngaphakathi kwegumbi lokulala ngesitayela seProvence
Ukunyamekelwa kweenyawo kubanda
Iimvumba ezithengisa impepho ekwindla
Ukulala ngesondo, isiluleko esisebenzayo
Indlela yokuphatha isifo sezintso ze-polycystic?
UMaxim Fadeev wabonisa isithombe somntwana ababhalisile ukuba wayeyintombi kaJulia Savicheva
Imithetho yokugcina ubudlelwane obuhle bentsapho
I-Puree esuka kwiilenti
Iifake zokukhulisa iso